Home Wararka Gudoomiye Gacal oo fariin u diray xildhibaanada galmudug
Gudoomiye Gacal oo fariin u diray xildhibaanada galmudug
Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee dowlad Goboleedka Galmudug ayaa Maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb, waxaana looga hadlay arrimo muhiim ah.
Inta uu socday kulanka Xildhibaanada Galmudug ayaa waxaa looga dooday Arrimo ku aadan Doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo maalinta berri oo Axad ah lagu wado inay ka dhacdo Dhuusamareeb.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal oo kulankaas shir Guddoominyay ayaa shaaciyay in Maalinta Berri ah oo Axad ah la qaban doono Doorashada Madaxweynaha iyo labadiisa ku-xigeen.
Sidoo kale Guddoomiye Gacal ayaa Xildhibaanada Galmudug faray inay dhamaantood looga baahan yahay inay soo xaadiran hoolka ay ka dhaceyso Doorashada, isla markaana ay ilaaliyaan waqtiga Doorashada.
Wafdi ka socad Beesha Caalamka iyo dowladda Federaalka ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaran Magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo la tilmaamay inay goobjoog ka noqonayaa Doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Ammaanka Magaalada ayaa siweyn loo adkeeyay, waxaana waddooyinka qaar la dhigay Ciidamo gaar ah, iyadoona sugida amniga ay iska kaashnayan Ciidanka dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.